Hiran State - News: HS:- Yaa sabab u ah amaan darada ka jirta Mogdishu?
HS:- Yaa sabab u ah amaan darada ka jirta Mogdishu?
HS:-Magaalada Mogdishu oo aheyd goob nabdoon waxaa ku soo badanaya dilalka qorsheysan ee loo geysanayo dadka shacabka ah iyo qaraxyo lagu bartilmaameedsanayo masuuliyiinta dowldaa iyo suxufiyiinta.
Hadaba isku dayo kala duwan iyo xog inteeda badan leysku haleyn karo ayaa waxaa jira warar xaqiijinaya in ay sabab u yahiin amaan darada ka jirta Mogdishu intaan oo kooxood oo is biirsaday.
1- Maalmahii ugu danbeysay waxaa howlahoodii shaqo iyo wadashaqeyntii dowlada si weyn uga gaabiyey maamulka gobolka Banaadir kadib sida warar sugan lagu helayo markii gudoomihaha gobolka Banaadir iyo dhawr gudoomiye degmeed ay howshooda ka gaabiyeen iyagoo ku xumeynaya dowlada cusub oo ay u arkaan iney xilka ka qaadeyso waa sidey iska dhaadhiciyeen iyaga.
2- Dhalinyaro wali ka amar qaata madaxweynahii waqtigiisa dhamaaday Shiikh Shariif oo ciidamada dowlada ka tirsan.
3- Kooxda Shabaab oo iyadu siyaasada ahaan fashilantay kuna jirta waqtiyadii ugu danbeeyey ee burburkeeda.
Marka laga hadlayo amaandarada ka jirta Mogdishu intaas oo koxood ayaa sabab u ah mana ahan wax shacabka ka qarsan siiba markaad aragto sida ay u shaqeynayaan maamulka gobolka Banaadir.
Waxaa kale oo jira shaqsiyaad horey uga tirsanaa xukumadii waqtigeedu dhamaaday oo wasiiro ka ahaa dowladii dhacday oo iyaguna qalalaasaha Mogdishu qeyb ka ah.
Marka laga soo tago dilalka iyo qaraxyada ka jiro magaalada Mogdishu waxaa jiro walwal xoogan oo soo food saaray kooxda Shabaab xili ay ajaaniibtii dagaalka ka waday Soomaaliya noqdeen kuwo dalka Kenya u dhaqaaqay oo xadka Kenya iyo Soomaaliya ku sugan si ay wadanka uga baxaan iyo kuwo dhawaan si dhuumaaleysi ah uga dhoofayo garoonka diyaaradaha NO 50 oo sida la sheegay dhawaan la furay ujeedada laga leeyahayna tahay in halkaas ay ka dhoofaan ajaaniibtii ku sugneyd Soomaaliya iyadoo ay arintaas fududeynayaan qaar ka mid ah saraakiisha dowlada kuwooda ku sugan Sh/hoose.
Marka aad dib u baarto qaabkii uu u shaqeyn jiray garoonka diyaaradaha ee No 50 waxuu ahaa garoon ay faaido weyn ku qabeen kooxda Shabaab iyadoona ay ka dhoofi jireen kana soo degi jireen hogaamiyayaasha Shabaab iyo Al qacida xili ay jirtay diyaarad toos ah oo ka shaqeyn jirtay Sh/hoose iyo Asmara.
Qudbad uu dhawaan jeediyey madaxweynaha cusub oo uu kooxda Shabaab u kala qaaday labo qeybood oo kala ah Soomaali iyo ajnabi aad ayuu hadalkaas u dhaawacay Shabaab waxey natiijadii noqotay in ajaanibtii maanta intooda badan dalka ka cararaan.
Inkasta oo ay qaraxyada iyo dilalka qorsheysan shegtaan Shabaab hadane maamulka gobolka Banaadir oo siweyn u filayey in uu doorashada ku soo bixi doono Shiikh Shariif hada uma muuqdaan kuwo diyaar u ah iney la shqeeyaan dowlada cusub.
Isku soo duuboo hadii madaxweynaha la soo daaho ku dhawaaqida r/wasaraha cusub Shabaab ka sokoow waxaa wax badan kaka ciyaari doona r/wasaaraha iyo wasiirada aan wali xilka wareejin ee u badan xildhibaanda cusub.
Soomaalida waxey ku maahmaahdaa dhereygii faraha ku bataan wuu cunto xumeeyaa waxaad moodaa in ay magaalada Mogdishu oo uu kusugan yahay madaxweynaha cusub kusoo badanayaan odoyaal koox koox u socda oo koox kasta ay dooneyso in uu qabiilkeeda ka yimaado r/wasaraha cusub.
Wey adag tahay in si sahlan looga baxo qalalaasaha iyo fowdada ilaa si deg deg ah ay masuuliyada ula waregaan r/wasaaraha cusub iyo golahiisa wasiirada. arinta kale ee aysan hada dad badan ogeyn ayaa ah in baarlamanka cusub uu ka kooban yahay 275 mudane 95% ka mid ahane ay doonayaan iney ka mid noqdaan dowlada cusub iyagoo xusul duub ugu jira sidii uu midkasta ku noqon lahaa wasiir hadii ay noqon wayaane ay carqaladeeyaan xukumada cusub.
Filo goor dhaw warbixin dheer oo ka hadleysa olole yaab leh oo ay magaalada Mogdishu ka wadaan Madaxweynahii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Mohamed iyo Cali Mohamed Geedi oo horey u soo noqday r/wasaare oo iyagu aad uga biyo diidsan in r/wasaaraha cusub ka yimaado beesha Mariixaan iyo talooyin horu dhac ah oo ay siiyeen madaxweynaha cusub oo aanu qaarkood helnay.
· admin on September 22 2012 14:27:56 · 0 Comments · 1978 Reads ·
14,589,179 unique visits